Fiara-tafika Nizeriana - Jereo eto ny lisitra feno misy ny tobin'ny tafika Nizeriana: Vaovao momba ny sekoly ankehitriny
Ny laharan'ny miaramila any Nizeria dia marika miaramila ampiasain'ny Tafika Nizeriana. Ity ambany ity ny lisitr'ireo laharana miaramila Nizeriana rehetra araka ny filaharany avy. Ny laharan'ny tafika dia misy na mizara roa, ny mpiandraikitra voatendry sy tsy komisiona.
Ny sampana serivisy tsirairay avy amin'ny tafika nizeriana dia manana marika mifandraika amin'izany. Ny sary famantarana ny Tafika Nizeriana dia marika iray mampiavaka azy amin'ny tafika an'habakabaka na amin'ny tafika an-dranomasina.
Izahay dia hanazava ny hevitry ny voromahery, ny famantarana kintana ary ny hevitry ny soratra arabo manoratra eo ambanin'ny sary.
Ny voromahery amin'ny sary famantarana ny tafika dia midika fahasoavana sy herin'ny Tafika Nizeriana. Toy ny fanaon'ny voromahery mitaingina ambony sy manafika amin'ny fomba marina, izany no fomba hamelezan'ny tafika ny fahavalon'i Nizeria rehefa miady amin'ny ady.
Ny mariky ny kintana dia maneho ny firaisan'i Nizeria ho firenena iray tsy azo zahana. Ity dia azo zahana tamin'ny taona 1914, nandritra ny fanakambanana.
Ny loko mavo sy mainty eo amin'ny kintana dia maneho ny atsimo sy ny avaratra mpiaro izay namorona an'i Nizeria iray.
Ny soratra arabo ao amin'ny sary famantarana ny tafika nizeriana rehefa adika amin'ny teny anglisy dia midika hoe 'Ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra irery ihany'.
Ny loko mena amin'ny sainam-pirenena dia mijoro amin'ny fandrahonana sy singa fahavalo ary ny mainty kosa maneho ny mpitaingin-tsoavaly sy ny tafika nizeriana.
Mpiandraikitra voatendry (CO): dia ireo mpitantana, mpamaha olana, mpiorina andraikitra lehibe ary mpanomana izay mitarika Miaramila voasoratra anarana amin'ny toe-javatra rehetra. tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ary fiofanana tafiditra.
Mpiandraikitra tsy voatendry (NCO): manamboninahitra miaramila izay omena fahefana amin'ny alàlan'ny manamboninahitra voatendry, saingy tsy raisina ara-teknika ho mpitondra izy.
Miaramila ho an'ny mpiasan'ny kaomisiona
Ny tafika Nizeriana dia manana laharana 11 ho an'ireo tompon'andraikitra voatendry izay Marshal Field no laharana ambony eo ary Lieutenant-n'i faharoa no laharana ambany indrindra. Eto ambany ny lisitr'ireo laharam-pahefana voatendry NA:
Marshal Field - ★★★★★ [Kintana 5]
General - ★★★★ [Kintana 4]
Lietnà jeneraly - ★★★ [Kintana 3]
Jeneraly Jeneraly - ★★ [Kintana 2]
Brigadier Jeneraly - ★ [Kintana 1]
Lieutenant-n'i faharoa - [Laharana ambany indrindra]
Miaramila ho an'ny mpiasan'ny asa tsy voatendry
Misy laharana 8 ao amin'ny Tafika Nizeriana ho an'ireo mpiandraikitra tsy komisiona. Voatanisa etsy ambany ireto:
Mpiandraikitra mpiambina kilasy I
Mpiambina antoka kilasy II
Sergeant an'ny mpiasa
Recruit - [Laharana ambany indrindra]
Tafika Nizeriana Portal naportal.com.ng Fidirana anarana 2021 Jereo ny dingana
Jereo ny lisitry ny kandidà voafantina 2021 fanavaozana ny tafika nizeriana 81RRI
81RRI Kandidà Nizeriana voafantina 2021/2022 ho an'ny fizahana mialoha ny fizahana
Kandidà Nizeriana 81RRI Kandidà voafantina 2021/2022 Jereo ny lisitra feno
Vaovaon'ny Tafika Nizeriana Androany 2021 Vaovao farany Tafika Nizeriana Ho an'ny Jolay
Tafika Nizeriana 81RRI Daty fanaovana fizahana 2021 sy ireo foibem-panadinana rehetra
Tafika Nizeriana 81RRI Fandraisana mpiasa 2021 Rohy fampiharana www.ims.army.mil.ng
Tags: Tafika Nizeriana, Tafika Nizeriana
« Maninona no mety ho idealy lehibe ny fanombohana orinasa any an-trano
MBA amin'ny teknolojia fampahalalana 2021 Details, Syllabus ary kariera »